Dhaalibaan Oo Magaalooyin hor leh la wareegtay, iyo Sarkaal Ameerikaan ah Oo la dilay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhaalibaan Oo Magaalooyin hor leh la wareegtay, iyo Sarkaal Ameerikaan ah Oo la dilay.
On May 9, 2018 170 0
Gobolka Baqlaan wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in dagaallo waaweyn oo dhexmaray Dhaalibaan iyo kuwa Xukuumadda Kaabul kadib ay Mujaahidiinta u suuragashey iney gacanta ku dhigaan gebi ahaanba magaalada Taalla-wabarfak.
Saanado milliteri oo hub ah, oo ay ku jiraan shan gaari oo nooca Renger ah ayay gacanta ku dhigeen ciidamada Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan, kadib dagaalka ka dhacay Taalla-wabarfak, waxaana intaas dheer gawaarida dagaalka ee lagu burburiyay dagaalka.
Ciidamada Xukuumadda Kaabul intii ka badbaaday rasaasta Dhaalibaan ayaa ka baxsaday magaalada, waxaana ay qabteen deegaanno kale oo weli ku jira gacanta Shisheeyaha.
Dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka Roozjaan ee wadanka Afqaanistaan waxay sheegayaan in ciidamada Imaarada ay dileen sarkaal sare oo Ameerikaan ah, halka ay dhaawacmeen malleeshiyaad katirsan xukuumadda Kaabul oo la socday.
Deegaan lagu magacabo Kaftar-khaani oo hoosyimaada magaalada Tarinkoot ee caasimadda gobolka Roozjaan ayaa waxaa soo gaaray Injineer Ameerikaan ah iyo ciidamo katirsan kumaandooska Kaabul, waxaana markii Mujaahidiintu ka war heleen arintan ku qaadeen dagaal adag.
Goobta waxaa ku dhintay Injineerkii Ameerikaanka, halka afar askari oo kale oo katirsan xukuumadda Kaabul ku dhaawacmeen goobta.
Isbuucyo gudahood, tan iyo markii lagu dhawaaqay howlgalka cusub ee Al-khandaq waxay ciidamada Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan gacanta ku dhigeen saddex degmo oo katirsan saddex gobol, waxaana ay kala yihiin Kooshistaan oo katirsan gobolka Badkhashaan, Qalcatu-Zaal oo hoostaga gobolka Qunduuz iyo Taalla-wabarfak oo hoostagta gobolka Baqlaan.